ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်စွမ်းအင်သုံးမီတာ၊ ဓာတ်ငွေ့ယန္တရား၊ အရည်စက်ပြင်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်နှင့်အခြားသီအိုရီများကိုပေါင်းစပ်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တိကျသောတိုင်းတာခြင်းတူရိယာများ၊ အလွန်နိမ့်သောဖိအားများနှင့်ဖိအားမြင့်မားသောမီတာစွမ်းဆောင်ရည်များ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့, အရည်ဓာတ်ငွေ့, အလင်းဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အခြားဓာတ်ငွေ့တိုင်းတာခြင်း။
ဓာတ်ငွေ့ Turbine Flowmeter သည်ဓာတ်ငွေ့ယန္တရား၊ အရည် mechanics၊ electromagnetism နှင့်အခြားသီအိုရီများကိုပေါင်းစပ်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တိကျသောတိုင်းတာခြင်းတူရိယာများ၊ အလွန်နိမ့်သောဖိအားများနှင့်ဖိအားမြင့်မားသောမီတာစွမ်းဆောင်ရည်၊ အမျိုးမျိုးသောအချက်ပြထုတ်လွှတ်မှုနည်းလမ်းများနှင့်သဘာ ၀ များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောစုပ်ယူမှုကိရိယာများကိုတီထွင်ရန်။ ဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့၊ အရည်ဓာတ်ငွေ့၊ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အခြားဓာတ်ငွေ့တိုင်းတာခြင်း။
တာဘိုင်စီးဆင်းမှုအာရုံခံကိရိယာနှင့်ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင် Flowmeter မှတီထွင်ထားသောအရေးပါသည့်အသိဉာဏ်တူရိယာကိုစွမ်းအင်နိမ့်သော single chip microcomputer နည်းပညာဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ နှစ်ဆအတန်းရှိအရည်ကြည်လင်သောမြေပြင်မြင်ကွင်းတွင်သိသာထင်ရှားသည့်အားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောယန္တရား၊ အလိုအလျောက်သိမြင်နားလည်မှုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောစာဖတ်ခြင်း၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့မှုမှအလင်းမ ၀ င်ခြင်း၊ တူရိယာမြှောက်ဖော်ကိန်းကိုအချက် ၆ ချက်ဖြင့်တည့်မတ်ပေးပြီး၊ တူရိယာမြှောက်ဖော်ကိန်းကိုအသိဉာဏ်ပြည့်မှီသောလျော်ကြေးပေးခြင်းဖြင့် nonlinear ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ ကြည်လင်ပြတ်သားသောအရည်ကြည်လင်ပြသသည့်မျက်နှာပြင်သည်ချက်ချင်းစီးဆင်းမှု (ဂဏန်း ၄ လုံးရှိတရားဝင်နံပါတ်များ) နှင့်တိုးပွားလာသောစီးဆင်းမှု (သုညလုပ်ဆောင်ချက်ပါ ၀ င်သည့်ဂဏန်း ၈ လုံးပါရှိသည့်နံပါတ်များ) ကိုဖော်ပြသည်။ ပါဝါပိတ်ပြီးနောက် ၁၀ နှစ်အတွင်းမှန်ကန်သောအချက်အလက်များကိုမဆုံးရှုံးပါနှင့်။ ပေါက်ကွဲမှုအားကာကွယ်နိုင်သည့်အဆင့်မှာ ExdIIBT6 ဖြစ်သည်။
gauge အချင်း 20、25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300
တိကျမှန်ကန်မှုကိုလူတန်းစား ± ၁.၅%၊ ၁.၀% (အထူး)
ဖြောင့်ပိုက်အပိုင်းများအတွက်လိုအပ်ချက်များ D 2DN မတိုင်မီ၊ ≥ 1DN ပြီးနောက်
တူရိယာပစ္စည်း ကိုယ်ထည်: သံမဏိ ၃၀၄
အသုံးပြုမှုအခြေအနေများ အလယ်အလတ်အပူချိန်: - 20 ° C + 80 ° C
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် - 30C ~ + 65 ° C
ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ: ၅% မှ ၉၀%
လေထုဖိအား: 86kpa ~ 106kpa
အလုပ်လုပ် power supply4~ 20 mA output၊ Pulse output, RS485 အတွက်သင့်လျော်သော A. External power supply + 24 VDC ± 15%
ခ။ အတွင်းစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု - ဗို့အားသည် ၂.၀ အောက်နိမ့်သောအခါ 3.6v10ah lithium ဘက်ထရီတစ်ခု၊ ဗို့အားညွှန်ပြမှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု A. အပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့ရေး: ≤ 1W
(ခ) အတွင်းစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု - ပျမ်းမျှအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု≤ 1W သည် (၃) နှစ်ကျော်ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်
တူရိယာပြသမှု အရည်ကြည်လင်ပြသမှု၊ ချက်ချင်းစီးဆင်းမှု၊ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောစီးဆင်းမှု၊ အပူချိန်နှင့်ဖိအားတို့ကိုအပူချိန်နှင့်ဖိအားပေးမှုတို့ဖြင့်ပြသနိုင်သည်
signal ကို output ကို 20mA, သွေးခုန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ
ဆက်သွယ်ရေး output RS485 ဆက်သွယ်ရေး
အချက်ပြလိုင်းဆက်သွယ်မှု 1.5 M ကို×ပြည်တွင်းချည်
နောက်တစ်ခု: Batch Controller